Siddeed Kheyraad Cajiib ah oo Bilaash ah oo loogu talagalay Sawirka iyo Naqshadeeyayaasha Webka | Abuurista khadka tooska ah
Jorge Neira | | Fuentes, Astaamaha, Khayraadka
Haddii aad tahay jaantus ama naqshadeeye websaydh, waa inaad taas ogaataa waxaa jira ilo kala duwan oo dhowaan la helay gebi ahaanba bilaash ah, oo aad fursad u leedahay inaad ku darto "sanduuqa qalabka".
Markaa hadaad rabto inaad ogaato waxa kheyraadkani yihiin, sii wad aqrinta, tan iyo markaas waxaan ka hadli doonaa kheyraadkan cusub ee cusub ee maya naqshadeeye garaaf ama webku waa inuu lumaa
Kheyraad bilaash ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafka
Kheyraadka ugu horeeya ee aan ka hadli doono ayaa ah Qalab, oo ah bog is-dhexgal bilaash ah oo si gaar ah loogu sameeyay WordPress.
Waxay hadda bixisaa hawl tafatiran cusub oo dheeri ah, iyada oo loo marayo taas oo ay suurtagal tahay in gebi ahaanba loo habeeyo naqshadeynta websaydhkaaga, si ay ugu habboon tahay nooc kasta oo qalab mobile ah iyo / ama kiniin ah, qaab muuqaal ah.
Iyada oo loo marayo Elementor, waxaad fursad u leedahay inaad beddel amarka tiirarka, beddel cabbirka noocyada farta ah ee aad isticmaasho, isku hagaaji walxaha oo dhan hal meel, ama midigta, bidix ama bartamaha, iyo sidoo kale inaad awood u leedahay inaad qeexdo qaabab kala duwan oo dhinaca ah.
Shaki la'aan, waxaa loola dhaqmaa hab gebi ahaanba hal abuur leh oo leh taas bogagga shabakadda waa la abuuri karaa ee WordPress, si ay muuqaal fiican u yeeshaan marka laga eego nooc kasta oo qalab elektaroonig ah.
Waa a ururinta qurux iyo soo jiidasho leh astaamaha retro, kuwaas oo mid waliba qaab EPS ah. Astaamahani waxay leeyihiin muuqaal ah inay gebi ahaanba bilaash tahay inaad kala soo baxdo adoo adeegsanaya tweet on Sellfy
Midabada astaamaha safarka
Astaamaha safarka midabku waa taxane soo jiidasho leh oo ah astaamo loogu talagalay "Icons8"si gaar ah loogu talagalay Bakhaarka Naqshadeeyayaasha Webka. Kooxdan astaanta ahi waxay leeyihiin ilaa 60 icons oo, marka lagu daro inay midab ahaan gebi ahaanba yihiin, mid kastaaba wuxuu gebi ahaanba ku xiran yahay safarka.
Waxay ka kooban tahay nooca gebi ahaanba bilaashka ah ee caanka ah font far, oo markii hore loo bilaabay inay tahay font oo ay ahayd in la bixiyo si loo isticmaalo, taasi waa sababta ay u leeyihiin glyphs yar, hase yeeshe, waxay sii ahaaneysaa qaab qoris qurux badan oo u oggolaaneysa in loo isticmaalo labadaba marka la sameynayo astaan ​​iyo marka cinwaan la abuurayo.
Tani waxay ku saabsan tahay a font wicitaanka qoraalka taas oo leh astaamo gaar ah oo gaar ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin xirmooyinka, xargaha iyo barar.
Cinwaanka Berlin, wuxuu ka kooban yahay koox ka mid ah noocyada muujinta kuwaas oo ay dhiirrigeliyaan noocyo kala duwan oo noocyada qaab-qoraaleedka caadiga ah, ee xarfaha joomatariyeed qaarkood oo la sii daayay bilowgii qarnigii hore. Ilaa hada, farta qoraalka Barlin ayaa leh 4 nooc mid walbana waxaa lagu heli karaa 3 ballac, oo caadi ah, X-dhiirran, isla markaana geesinimo leh.
Burush Photoshop Cadaadis
Burushyada ceeryaantu waxay ku saabsan yihiin taxane ballaaran oo ah Burush Photoshop, taas oo ay suurtagal tahay in lagu daro saameynta ceeryaamada nooc kasta oo sawir ah ama garaaf ah ama mashruuc naqshadeynta websaydhka ah.
Astaamaha warbaahinta vector
Astaamaha warbaahinta vector, Waa ilo aad u faa'iido badan oo loogu talagalay barnaamijyada shabakadda, maaddaama ay ku saabsan tahay taxane ah astaamaha warbaahinta kuwaas oo lagu heli karo qaab vector ah.
Mawduuca mawduucyada caalamiga ah
Mawduuca mawduucyada guud ee adduunka ayaa ku saabsan template ah oo si gaar ah loogu talagalay boggaga internetka, kaas oo lagu heli karo qaab PSD la yaab leh; template ayaa sheegay in la wadaago iyada oo loo marayo Fikradaha casriga ah.
Sidaad arki karto, kuwani waa sideed kheyraad oo ka sokow ahaansho gebi ahaanba bilaash ah, waxay u noqdaan kuwo gebi ahaanba ku habboon naqshadeeye kasta oo naqshadeeya ama naqshadeeye websaydh ah, iyadoon loo eegin cidda hadda bilaabaysa ama horeba khibrad ugu lahayd adduunka naqshadeynta.
Kheyraadkaas ayaa fursad kuu siin doona fuliyaan mashaariicdaada si ka wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Siddeed Kheyraad Cajiib ah oo Bilaash ah oo loogu talagalay Sawirka iyo Naqshadeeyayaasha Webka
Waxaan aad ula socdaa balooggan, waxaan bartay waxyaabo badan waxaanan awooday inaan helo ilo. Waan ka xumahay waligay wax ma qorin, laakiin markan waxaan qorayaa waa inaan kaaga tago cabasho yar, maadaama ay ka hadlayso ilaha, magacyadooda, laakiin ma arko ilo aan ka soo dejisto, waxaan u maleynayaa in qoraalkan badh la dhammeeyay.
Mauricio, waan ka xumahay qaladka.
Jawaab Jorge Neira
Mahadsanid, waxaana jira qoraalo kale oo isla dhibaatadan leh, waxaan rajeynayaa inay saxaan.
cirfiid Wolf dijo
Waad ku mahadsantahay macluumaadka wanaagsan. Wax kasta oo aad wax ku ool ah!
Ku jawaab lobogris
Isku qor koorsooyinka 50% ee Trazos_ ee loogu talagalay naqshadeeyayaasha
Baro sida loo isticmaalo miirayaasha Photoshop adoo adeegsanaya hagahan